Showing ११-२० of १४५ items.
भ्रमण वर्षको सार्थकता
अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष आगमनसँगै नेपालमा भ्रमण वर्ष २०२० शुरु भएको छ । सरकारले भ्रमण वर्षको निकै तामझामका साथ शुभारम्भ गरेको छ । बुधबार सङ्घीय राजधानीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरे । अन्य प्रदेशहरूमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूले उद्घाटन गरेका छन् । २० लाख विदेशी पर्यटकहरू नेपाल भिœयाउने लक्ष्यसहित शुरु गरिएको भ्रमण वर्षको शुभारम्भको तामझामलाई सार्थक बनाउन चुनौती पनि उत्तिकै छ । आफ्नो मुलुकबाट सुन्दर शान्त नेपाल घुम्ने उत्साह बोकेर प्लेन चढ्दा पर्यटकहरूलाई जुन उत्साह हुन्छ, त्यो नेपालका विमानस्थलबाट झरेर हिँड्दा हुने धुलो, फोहोरले मन अमिलो बन
जनप्रतिनिधिका लापरबाही र कानूनी राज्य
सङ्खुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिकाको को १ झ ५९२ नम्बरको सवारी अध्यक्ष रत्नबहादुर सुब्बाले निजी प्रयोजन गरेको खबर बाहिरिएको छ । सरकारी कार्यको लागि खरिद गरिएको सवारी व्यक्तिगत प्रयोजन गरिनु कानून बर्जित कुरा हो । तर, अध्यक्ष सुब्बाले कुखुराको चल्ला र भुस ढुवानी गरेर जुन हर्कत देखाएका छन्, त्यसले सिङ्गो देशभरका स्थानीय तहमा भइरहेको बेथितिको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसलाई प्रमाणित गर्न केही अघिका उदाहरणहरू पेश गर्दा बढी सार्थक होला । २०७५ जेठ २८ गते मोरङ सुनवर्सी–४ का अध्यक्ष श्रवण राजवंशीको को १ ब १३६३ नम्बरको मोटरसाइकल उनकै छोराले दुरुपयोग गरेको अवस्थामा धनकुटामा फेला परेको थियो । श्रवणका छोरा स
विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सक्छ सुन्तलाले
नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर गौरव गरिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरू पनि हरेकजसो कार्यक्रममा कृषिको कुरा गर्छन् । तर, देशमा उत्पादन भइरहेका धेरै कृषिजन्य वस्तुले बजार पाउन सकेका छैनन् । यतिबेला बजारमा सुन्तलाको मौसम छ । बजारमा जताततै सुन्तला पाइए पनि यसको मूल्यमा एकरूपता पाइँदैन। कतिपय ठाउँमा उत्पादन भएका सुन्तला बजार पुग्न सकेका छैनन् । त्यसका लागि सरकारको पर्याप्त सहयोग आवश्यक छ । प्रदेश नं.१मा पनि सुन्तला प्रशस्त उत्पादन हुने गरेको छ । प्रदेशका धनकुटा, भोजपुर, पाँचथर, खोटाङ, तेह्रथुम, इलामलगायतका जिल्लामा सुन्तला राम्रो उत्पादन हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६मा धरान कृषि उपज बजारस्थलमा ७ ह
पीडित महिलाले अब कहाँ न्याय माग्ने ?
आफ्नो आश्रममा आएकी २९ वर्षीया महिला अनुयायीलाई जबरजस्ती करणी अर्थात् बलात्कार गरेको अरोप लागेका ४५ वर्षीय सिद्धबाबा उर्फ कृष्णबहादुर गिरी तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा सोमबार छुटे । अदालतले तीनलाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटाउन आदेश दिएपछि उनी छुटेका हुन् । आम सर्वसाधारणले यौन दुव्र्यवहार गरेपछि पक्राउ परेमा तत्काल अँध्यारो छिंडी जस्तो हिरासतमा राखिए पनि यस केसमा सिद्धबाबा भाग्यमानी सावित मात्र भएनन् बलात्कार गरेको किटानी जाहेरी नै परेर पीडित महिलासँग माफ मागेको अडियो रेकर्ड, मोबाइलको म्यासेज, मुचुल्का, दुई भक्तजनले सिद्धबाबालाई मोबाइल उपलव्ध गराएको सबुत प्रमाण पुग्दा पनि तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटे । अनुस
प्रकाशित मितिः पुष १५, २०७६
भ्रमण वर्ष र कामहरू
एक दिनपछि नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष–२०२० मा प्रवेश गर्दै छौं । यो भ्रमण वर्ष २०२० मा नेपालमा २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य सरकारको छ । यो मात्रामा पर्यटक आउन मासिक १ लाख ६६ हजार ६ सय ६७ जना भिœयाउनु पर्ने हुन्छ । नेपालमा विश्वको थुप्रै मुलुकबाट विदेशी पर्यटक आउने गरेको तथ्याङ्क पर्यटन बोर्डसँग छ । तीमध्ये भारत पनि एक हो । छिमेकी मुलुक भारतबाट धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य यदि सरकारले राख्ने हो भने यो सङ्ख्यामा पर्यटक पु¥याउन कठिन छैन । अहिले त तीन तहको सरकार छ । ती सरकारहरूले चाहेको खण्डमा भ्रमण वर्षको सार्थकता सहजै पूरा हुनेछ । स्थानीय, प्रदेश र
प्रकाशित मितिः पुष १४, २०७६
नेपाली राजनीतिमा आएको ट्विस्ट
एक सातामा नेपाली राजनीतिमा फेरि एक पटक ट्विस्ट आएको छ । समाजवादीको समर्थनमा बनेको केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाईको सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालसँग दुई बुँदे सहमति गरेपछि नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग उठेको हो । त्यही तरङ्गको क्रममा समाजवादी पार्टीले बुधबार समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक घोषणा गरेको छ । त्यसो त, मङ्गलबार नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपप्रधान तथा कानूनमन्त्री उपेन्द्र यादवले राजीनामा बुझाएका थिए । राजीनामा बुझाएको भोलिपल्टै समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरिनुले नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक ट्विस्ट आएको हो । समाजवादीले संविधान संशोधनको मुद्दालाई लिएर ओली सरकारलाई समर्थन गरेको थियो २०७५ जे
उच्च बाँधको विकल्प खोजौं
सप्तकोशी नदीमा उच्च बाँध बनाएर विहारको बाढी नियन्त्रण गर्ने अनि पानीलाई सिंचाइमा प्रयोग गर्ने भारतको योजना नयाँ होइन । लामो समयदेखि भारत नेपालमा अग्लो बाँध बनाएर सप्तकोशीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्छ । भारतले बाँधका लागि नेपाली सत्तासीन नेताहरूलाई समेत सहमत गराएर लामो समयदेखि अध्ययनको काम गरिरहेको छ तर उच्च बाँधले नेपाललाई फाइदाभन्दा हानि नै धेरै गर्ने भन्दै स्थानीयस्तरबाट विरोधका स्वर उर्लिएपछि हालसम्म अध्ययनको काम पूरा हुन सकेको छैन । विश्वमै उच्च बाँधका कारण वातावरणीय र मानवीय खतरा बढेको भन्दै जलस्रोतविज्ञ र वातावरणविज्ञले विरोध जनाउँदै आएका छन् । विश्व बाँध आयोगले समेत उच्च बाँधको अवधार
बिरामीको उपचारमा सजग होऊ
मान्छेको ज्यान बचाउने पेशा अँगालेका चिकित्सकको धर्म मानवता हो । बिरामीको उपचार गरेर सेवा गर्नु चिकित्सकका लागि अहोभाग्य हो । आर्थिक अभावमा पिल्सिएका दुःखी, गरिब, असहाय रोगीहरूलाई निःशुल्क उपचार गरेर स्वस्थ बनाउने चिकित्सक त समाजमा ‘जीवित भगवान’ नै ठहरिन्छन् । आर्थिक लाभ नै लिएर भए पनि मान्छेको ज्यान बचाउँदा त चिकित्सक पनि खुशी हुन्छन् र बाँच्ने झन् खुशी । ज्यान बचाउने यस्तो अवसर अन्य पेशा वा व्यावसाय अँगाल्नेहरूले कमै पाउँछन् । त्यसैले त चिकित्सा पेशालाई मानव सभ्यतामा उच्च सम्मान मात्र दिइएको छैन, सेवामूलक पेशाको स्थान दिइएको छ । तर यी सबै सन्दर्भहरू अचेल आदर्शमात्र दरिन थालेका छन
तराईको शीतलहर र गरिबी
तराई क्षेत्रमा शीतलहर अत्यधिक बढेको छ । तराईका अधिकांश क्षेत्रमा हुस्सु तथा कुहिरो लागेका कारण तामक्रम घट्दो अवस्थामा छ । शीतलहर ‘हुने खानेहरू’का लागि समान्य अवस्था हो तर ‘हँुदा खानेहरू’का लागि शीतलहर ‘ज्यानमारा’ अवस्था पनि हो । यति बेला तराईमा शीतलहर र चिसोका कारण मानिसको ज्यान जाने क्रम शुरु भएको छ । विशेष गरेर पुस माघभरिमा यो तराईमा ज्यान जानेहरूको तथ्याङ्क अङ्कगणितीय रूपमा वृद्धि हुनेछ । जाडो मौसममा हुने शीतलहर गरिबसँग सम्बन्ध राख्दछ । जो गरिबीको रेखामुनि जीवन बिताइरहेका छन्, उनीहरूरु शीतलहरको शिकार हुने गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड पोभर
करको नाममा हुने जथाभावी असुली रोक
स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग तथा परिचालन गर्न यति बेला स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । लोकतन्त्र स्थापना भए पछि बनेको नेपालको संविधानले केन्द्रीकृत अधिकारलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउनु यो संविधानको सुन्दर पक्ष हो । केन्द्रको अधिकार स्थानीयले उपभोग तथा परिचालन गर्न पाउनु सङ्घीय संरचना निर्माणपछिको ठूलो उपलब्धि हो । तर, त्यही अधिकार र अवसरलाई गलत रूपमा प्रयोग हुनु विडम्बना हो । स्थानीय जनप्रनिधिको आडमा दादागिरी र चम्चागिरी गरेर ठेक्का पट्टा हत्याएर जनभावना विपरीत काम गरेर स्थानीय तहले पाएको हकअधिकारलाई चरम दुरुपयोग गरी जनतालाई सास्ती दिनु उचित होइन । मोरङको कटहरी गाउँपालिकामा विदेशी सवारी साध